Lahatsoratra nataon'i Serban Enache momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Serban Enache
Nandritra ny 20 taona niainany tamin'ny famolavolana sy haino aman-jery vaovao, i Serban dia voaporofo fa mpanatanteraka mahay, mifangaro tsara amin'ny fahaiza-mamorona sy mpanatanteraka. Niara-nanorina an'i Archiweb tamin'ny taona 1998 izy, mpitarika nahazo loka teo amin'ireo orinasan-tranonkala famolavolana tranonkala tany Eoropa, ary nijery ny maso ivoho ny maso ivoho any am-piandohan'ny taona 2000. na manatsara ny fisian'izy ireo an-tserasera. Serban dia mitantana ny paikadim-pampandrosoana orinasa Dreamstime, ary tafiditra lalina amin'ny asa ataon'ny vondrom-piarahamonina vohikala isan'andro. Izy dia fahitana fahitana izay mino ny fanakorontanana ny fenitry ny asa hitrandrahana safidy vaovao. Nanomboka ny Dreamstime tamin'ny fakantsary nomerika efa tsy lany andro sy ny fanangonana sary azy manokana. Nanenjika ny nofinofiny izy ary izao Dreamstime, ankoatry ny maha masoivohona sy orinasa iray, no toeram-pivoriana lehibe indrindra ho an'ireo mpaka sary sy mpamorona mafana fo.